कला साहित्य – Sidha Patra
गणतन्त्र बचाउन देश तिमी जुरुक्क उठ,हल्ला गर्नेले हल्ला गरि रहन्छ जनताका बैरिलाई भने ठाेक । २०७९ सालकाे निर्वाचन यसरी आएको छ,१९ दिने महान जनआन्दोलनकाे उपलब्धि खाने तरबरमा छ । जनताको उपलब्धि युरोपेली युनियन अमेरिका र भारत खान तयार छ,स्थानिय निर्वाचन गराउन जादा यिनिहरु खुसी भई बसेकाे छ । देशभक्त हु भन्ने जनतान्त्रिक शक्ति एमाले प्रतिगामि […]
दाङ । साहित्यकर्मिहरुले राजनितिक बिकृति र बिसंगतिलाई ट्रायाकमा ल्याउन खर्बदारी गरिरहनु पर्ने मंगलवार देउखुरीको गढवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका छन् । नेपाली साहित्य संसार अन्र्तराष्ट्रिय सञ्जालको दोस्रो बाषिकोत्सव समारोह तथा जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगिताको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश साहित्यकारहरुले यस्तो बताएका हुन् । देउखुरी साहित्य मंच र देउखुरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रको आयोजना एवं नेपाली […]
कतिका चर्को दमन शाषक तिम्रो ,तिमी दमन गरि रर्‍याै दमन कै गर्भमा १ मई १८८८ हुर्की रर्‍याे हाम्रो । शाेषण दमन भईरहन्छ मजदुर किसान बिद्रोहि हुन्छ । बिद्रोहकाे बिस्फाेठले समानता पाउँछ । १८८८ काे अमेरिकी सिकाङगाे शहर रक्त रन्जित भयाे । ८ घन्टा श्रम,८ घन्टा मनाेरन्जन ,र ८ घन्टा आराम मजदुरकाे जित भएको इतिहास रर्‍याे […]
देश निर्वाचनमा हाेमिएकाे छ । हाम्रो संयुक्त गठबन्धन छ । देश निर्वाचनले तातो राताे बनेकाे छ । गणतन्त्रलाई सखाप पार्ने बिरुद्ध हाम्रो संयुक्त गठबन्धन छ । देश निर्वाचनले गर्दा जुरुक्क उठेको छ । स्थानिय सरकारलाई पुर्ण अधिकार दिने हाम्रो संयुक्त गठबन्धन छ । देश निर्वाचनले गर्दा हलचलमा छ । सम्पुर्ण दलाल नेताहरुकाे जनता प्रतिकाे प्रतिबद्द […]
कपिलबस्तु । लुम्बिनी प्रदेश वाङमय प्रतिष्ठानको आइतवार कपिलबस्तुमा भएको प्रदेश स्तरीय भेलाले ऋषि आजाद आचार्यलाई प्रदेश वाङमय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा चयन गरेको छ । आजादको अध्यक्षतामा भएको प्रतिष्ठानको भेलालाई पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले उद्घाटन गर्नु भएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी नेपालले भाषा साहित्य,कला र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र उन्नयनका लागि साहित्यकारहरुको अहं भूमिका […]
“झुट्टा आश्वासन र भ्रममा”
“यो समय नेताहरुले तुनामुना बुन्न सस्तो लोकप्रिय कमाउन गुलिया भाषण दिनछन् । कस्ता निरह युवा केही पाइ हाल्लिन्छ कि भनेर उनीहरुको पछाडि लुक्कुर लुक्कुर हिड्छ्न ।” तिमीहरु नेताहरुको गुण दोष छुट्टाउनौ किन ? यो देशको हालत यहाँ सम्म पुराउन मा कस्को कमि थियोे अध्यन गरि सहभागी बन । हामी पुर्ण विवेकशिल मान्छे हौं भने प्रतिगामी […]
“सत्य चिज पहिलोपटक नमिठाे हुन्छ !!”
हाम्रो लडाइँ धर्तिमा असत्य र असमानताकाे बिरुद्ध लडाइँ हाे । मुटठिभर शाेषक भराैठेका मानिसहरु हाम्रो लडाइँमा सत्यलाई कुल्चनु उनिहरुकाे काम हाे । धर्तिमा असमानताकाे राज्य ब्यवस्थाकाे ठाउँमा जनबादि राज्य सत्ता ल्याउने हाम्रो काम हाे । सत्य चिजलाई ताेडमाेड गरेर उसले अराजक सैलिमा जनता माझमा हुटिङ गरेर असत्यलाई प्रयाेग गर्नु उसको जिम्मेवारी हाे । जिम्मेवारी दिदा […]
साम्यवादी बिचारक हरु आफ्नै उच्च संस्कृति अनि स्वभाव । शोषण गर्ने,भ्रष्ट,दलाल र देशद्रोही प्रती हुँदैन सहानुभूति दिने रवाफ । उसले सर्वहारा संस्कृति अङग्गिकार गर्नै पर्दछ । संसारभरि का श्रमजीवी बर्गको मुक्ति नपाउदा सम्म संघर्ष को सारथि बन्नै पर्छ । ब्यख्या र विष्लेषण को मात्र भर पर्दैन,ईश्वरिय अलौकिक शक्ति लाई बिस्वास गर्दैन । उसले जाँच्ने कसि […]
महोत्सवमा आज चर्चित थारू गायक राज कुश्मी,कृष्ण रेउले लगायतका कलाकारहरू आउँदै
दाङ देउखुरीको सिसहनियाँ–महदेवा जोड्ने नेपालको दोस्रो लामो पुलमा सञ्चालित प्रथम राप्ती पुल महाशिवरात्री मेला महोत्सवमा आज फागुन २१ गते चर्चित लोकदोहरी गायक कृष्ण रेउले, चर्चित थारू गायकहरू राज कुश्मी, श्रीनिवास चौधरी, थारू गायिकाहरू सोनु कुश्मी, समीक्षा चाैधरी लगायतका कलाकारहरु आउन लागेका छन् । त्यसै गरी महाेत्सवमा इन्द्रणी कार्यक्रमकी चर्चित बाल गायिका एक्टिमा परियार साथमा कुशल […]